Goobaha Khadka Tooska ah ee Boosniya iyo Herzegovina - Xeerarka gunnada ee Khadka Tooska ah ee Casino
Loading ... Boosniya iyo Herzegovina, dhammaan noocyada khamaarka waa sharci, oo ay ku jiraan ciyaaraha casino, sharadka isboortiga iyo bakhtiyaanasiibka qaranka. Waddanku wuxuu leeyahay hal naadi oo weyn, oo loo yaqaan 'Coloseum Club Casino', kaas oo laga furay 2002 magaalada Sarajevo. Iyo 2011-kii casino kale ayaa laga furay Banja Luka, caasimada Republika Srpska, qaabab dowladeed oo madaxbanaan oo kajira dhulka Bosnia iyo Herzegovina. Sannadkii 2011-kii, Republika Srpska waxay sidoo kale bixisay ruqsad loogu talagalay ciyaaraha khadka tooska ah ee loo yaqaan 'WILLIAMS', waxay ku bixisaa qamaar isboorti iyo ciyaaro naadi iyadoo loo marayo internetka.
Sharad ku saabsan isboortiga guud ahaan sidoo kale waa sharci, waddanka oo dhan waxaa jira in ka badan 250 buug-sameeyaal. Qaarkood waa kuwa maxalliga ah, laakiin sidoo kale waxaa jira tiro shirkado reer Croatia ah oo ka shaqeeya Bosnia iyo Herzegovina. Waxaa jira laba bakhtiyaa-nasiibka. Bakhtiyaa-nasiibka gobolka LutrijaBiH waa alaab-qeybiyaha ugu weyn ee bakhtiyaa-nasiibka dalka oo ku yaal Sarajevo, iyo Glory Leisure Banja Luka waxay ku taal Jamhuuriyadda Srpska
Horraantii 2013 waxaa la go'aamiyay in la mamnuuco adeegsiga IP-cinwaanada adeegyada khamaarka ee ajnabiga ah. Sikastaba, tani waxay dhalisay qeylo dhaan xoogan oo shacabka ah, maxkamadaha Bosniyana waxay ka laabteen go, aankoodii ay ku mamnuuceen gelitaanka boggaga ajaanibta ee khamaarka qadka ee Bosnia iyo Herzegovina. Hadda waxaad ka ciyaari kartaa goobaha khamaarka ee internetka oo ku yaal meel ka baxsan dalka.
Bishii Janaayo 2011, ururka siyaasadeed ee Bosnia iyo Herzegovina, Republika Srpska waxay bixisay liisanka ugu horreeya ee khamaarka khadka tooska ah ee loo yaqaan 'WILLIAMS'. Websaytka WWin khamaarka khadka tooska ah (wwin.ba) wuxuu siiyaa ciyaartoy khadka tooska ah ee qamaarka iyo isboorti isboorti ee loogu talagalay ciyaartoyda gobolka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, ciyaaryahan kasta oo aan diiwaan gashaneyn ama uusan haysan xisaab bangi oo ku yaal Jamhuuriyadda Srpska, ayaa xakameynaya maamulaha.
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbala ciyaartoy ka socota Bosnia iyo Herzegovina, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka bilaabanta mashiinnada ciyaarta ilaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa dib u eegistayada bogagga internetka ee khadka tooska ah, si aad uga feejignaato dhiirrigelinta khadka tooska ah ee ugu wanaagsan, gunnooyinka iyo xulashooyinka lacag bixinta ee ay heli karaan ciyaartoy ka socota Bosnia iyo Herzegovina.
Eeg liiska boggaga internetka ee turubka ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Bosnia iyo Herzegovina, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Ku raaxayso kala duwanaanshaha badan ee roulette, blackjack, hold'em, iyo ciyaaraha kale ee kaararka. Wixii macluumaad dheeraad ah, akhri dib u eegistayada boggaga internetka ee aqbalaadda ciyaartoy ka socota Bosnia iyo Herzegovina.
Eeg liiska boggaga sharadka internetka ee isboortiga, ka qaadashada ciyaartoy ka socota Bosnia iyo Herzegovina, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Dhig sharadkaaga, xulo munaasabadda kuugu habboon adiga iyo koeffitsinty oo ka mid ah soo-jeedinta dhowr dersin buug-sameeyeyaal khadka tooska ah ka sameeya Bosnia iyo Herzegovina. Iyo wixii macluumaad dheeraad ah, tixraac dib-u-eegistayada goobaha qamaarka ee khadka tooska ah laga ciyaaro ee isboortiga, adoo ciyaartoy ka qaadanaya Bosnia iyo Herzegovina.
Eeg liiska boggaga internetka ee bingo, oo ciyaartoy ka qaadanaya Bosnia iyo Herzegovina, oo aad siineyso ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa dib-u-eegistayada bogagga shabakadda bingo ee sharraxaya dallacsiinta, gunnooyinka iyo hababka dhigashada ee goobaha bingo-ka ee laga heli karo ciyaartoyda Bosnia iyo Herzegovina.
khamaarka bilaashka ah ee casino